मनोरञ्जन – Page 932 – Etajakhabar
सडकमा हिँडीरहेकी किमको ‘ पुठ्ठो’मा नै किस गर्न खोजेका यि युवकलाई बडिगार्डले यसरी तह लगाए
एजेन्सी। घरबाट बाहिर निस्किँदा होस् वा गर्भवती हुँदा होस् इन्स्टाग्रामलाई हट बनाइराख्न हलीउड रियालीटि शो स्टार तथा मोडल किम कार्दशियनलाई कसैले सिकाउनुपर्दैन । उनले आफ्नो सेडुल अनुसार नै आफ्नो इन्स्टाग्रामलाई तताई राखेकी हुन्छिन् । यतिबेला पनि उनको इन्स्टाग्राममा उनको टपलेस फोटो ताजै छ । जारी पेरिस फेसन सप्ताहकै बेला किमले आफ्नै इन्स्टाग्राममा टपलेस तस्बिर अपलोड गरेपछि फेरी एक पटक हलीउड त...
हलीउडमा चल्यो मोडलहरुबीच शरीर देखाउने होडबाजी, पास्कलका पहिरनले छोप्न सकनेनन् उनका बक्षस्थल
एजेन्सी । हलीउडमा अहिले शरीर देखाउनेहरुको होड नै चलेको छ । अहिले चल्तिका स्टारले बढी प्रतिस्पर्धाका कारण पनि यस्तो सुत्रलाई अगालीरहेका छन् । यसैबिच २९ वर्षिया मोडल तथा चर्चित स्टार पास्कल क्रेमर पनि शरीर प्रर्दशन गर्ने मामीलामा आँफुलाई १ कदम अगाडी राख्दै आएकी छिन् । हालै एक पार्टीमा पुगेकी पास्कलले वन पिसमा आफ्ना संवेदनशिल अंग नै छरपष्ट देखिनेगरी माथिल्लो पहिरन अत्याधिक खुला राखेर शरीर श...
छविलाई ‘बा’ भन्नेले पाउने भए आमा, आमा हुन् शिल्पा पोखरेल (भिडियो सहित)
ताजाखबर। तपाईँले धेरै दिनदेखी एउटै कुरा सुनिरहनुभएको छ, 'शिल्पा-छविको बिवाह' । अब हामी तपाईँलाई यस बारेमा स्पष्ट पार्न चाहन्छौँ । 'किस्मत २'का नायक पृथ्वीराज प्रसाईँ र नायिका शिल्पा पोखरेलले एक भिडियो कुराकानीमा यसबारेमा स्पष्ट बोलेका छन् । पृथ्वीले छविलाई 'कुरा के हो ?' भनेर सोधेको बेला जे सुनेका छौ त्यहि हो भनेपछि अब उनले आमा पाउने भएका छन् । हेर्नुहोस् पुरा भिडियो: https://youtu.be/...
आतिफको कन्सर्ट रद्द
ताजाखबर। पाकिस्तानका लीडिंग सिंगर आतिफ असलमको भारतको गुडगाउँमा हुने भनिएको कन्सर्ट रद्द भएको छ । कन्‍सर्ट १५ अक्टूबरमा हुनेवाला थियो । कोनसेप्ट इन्टरटेनमेन्टका अधिकारिले बताए अनुसार उक्त कार्यक्रम भारत-पाकिस्तानबीच बढेको तनावका कारण अनिश्चितकालको लागि सारिएको हो । गुडगाउँ जिल्ला प्रशासनले सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै बुधवार पाकिस्तानी गायक आतिफ असलमको कन्सर्ट आयोजकलाई कार्यक्रम रोक्न आग्रह ...
मनालीमा बुलेट बाइक चलाउँदै सलमान
बलिउड अभिनेताहरूको फ्यान फलोइङ साँच्चिकै लोभलाग्दो छ । ठूलो फ्यान फलोइङ भएकाले नै हुनुपर्छ, उनीहरूका केही कुरा पनि लामो समय गोप्य रहन पनि सक्दैन । एउटा अभिनेता कहाँ छ र के गरिरहेको छ भन्नेमा भारतीय प्रशंसकले राम्रै ध्यान दिन्छन् । यही भएर हुन सक्छ, मनालीमा फिल्म सुटिङ गरिरहेका सलमान खान बारम्बार चर्चामा पनि आइरहेका छन् । अहिले सलमान खान कबिर खानको फिल्म ‘ट्युबलाइट’को सुटिङका लागि मनाली पुगेका छन् ...
नायिका तथा मोडल मोना सिंहको अश्लिल भिडियोले बनायो उनको करियरलाई नै डामाडोल, नग्न भिडियो भाइरल
एजेन्सी । बलीउड नायिका तथा मोडल मोना सिंहको अश्लिल भिडियो बाहिरिएपछि उनी निक्कै तनावमा छिन् । सोनी टेलिभिजनको जस्सी जैसी कोही नही भन्ने सिरियलबाट चर्चामा आएकी बलिउड अभिनेत्री मोना सिंहलाई प्रष्टसँग नै चिनिने अश्लिल भिडियो बाहिरिएपछि उनको करियर नै धरापमा परेको छ । भिडियोमा नायिका तथा मोडल सिंह नाङ्गै देखिएकी थिइन् । उक्त काण्डपछि उनी लामो समय हराएकि थिइन् ।
हेर्नुहोस् बले र रक्षाको प्रेम (भिडियो)
ताजाखबर। हाँस्यटेलिश्रृंखला "भद्रगोल"मा अभिनय गरेर चर्चामा आएका सागर लम्साल (बले) र रक्षा श्रेष्ठले अभिनय गरेको नयाँ म्यूजिक भिडियो सार्वजनिक भएको छ । "क पुरी क" बोलको सार्वजनिक गीतमा रक्षा बलेको जोडी बनेर अभिनय गरेकी छिन् । भिडियोमा रक्षा र बलेसँगै हेलो क्रियू ग्रुपका कलाकारहरुले पनि नृत्य गरेका छन् । भीम बिसीको शब्द र संगीत रहेको गीतमा अल्मोडा राना उप्रेतीको एरेन्ज रहेको छ । गीतमा सुनिल कट...
दुर्गाको ‘लुकेको आँशु…’ सार्वजनिक (भिडियो)
ताजाखबर। गायिका दुर्गा दाहाल साउादको दोस्रो एल्बम 'लुकेको आँशु...'को 'मन परेको मान्छे पाउँदा ...' बोलको गीतको म्युजिक भिडियो सार्वजनिक भएको छ । गीतमा शब्द, स्वर, संगीत दुर्गा दाहाल साउदकै रहेको छ । निकै रमाइलो तवरले तामधामका साथ निर्माण गरिएको भिडियोमा निशा शाह र उनका साथीहरुको अभिनय देख्न सकिन्छ । गीतको भिडियो मनोज थापाले निर्देशन गरेका हुन् । एल्बम 'लुकेको आँशु'मा मनपरेको मान्छे पाउँदा, पै...
हेर्दा हर्दै प्रियंका चोपडाले फुकालिन लगाएका लुगा, भिडियो बन्यो भाइरल
एजेन्सी। बलीउड चर्चित अभिनेत्री प्रियंका चोपडा बलीउड हुँदै हलीउडको यात्रामा मात्रै दौडीरहेकी छैनन्, हलीउड प्रवेश गरेको छोटो समयमा नै औधी चर्चामा छिन् । हलीउडमा छोटा दतथा लामा चलचित्रहरुमा पालै पालो अभिनय गरीरहेकी यि सुन्दरीले हालै गफै गफमा कपडा फुकालेपछि उक्त भिडियो भाइरल बनेको छ । जुन दृश्य प्रियंकाको पहिलो अमेरिकन शो ‘क्वान्टिको’को दोस्रो सिजनको पहिलो इपिसोड अन्र्तगतको हो । जुन मंगलबार मात...
सेलिब्रेटी मोडल भन्दा पनि चर्चित छिन् यि गाउँले सुन्दरी युवती, तर कसरी ?
एजेन्सी । चीनिया नागरिकहरु सुन्दर र राम्रा मात्रै होइनन् शालिनताका खानि नै मानिन्छन् । जसकी पछिल्लो उदाहरण बनेकी छिन् यि गाउँले युवती । जो चल्तिीकी कुनै मोडल र सेलीब्रेली भन्दा कम प्रख्यात छैनन् । गाउँले युवतीहरुलाई शहरी मोडलसँग तुलना गर्नु निरर्थक मानिने परम्परागत विचारलाई यि सुन्दरी गाउँले युवतीले ओझेलमा पारिदिएकी छिन् । यि सुन्दरीका विषयमा धेरै कुरा सार्वजनिक नगरिए पनि उनका तस्विर चिनियाँ...
Previous 1 … 931 932 933 … 1,033 Next
-20451 second ago
-19642 second ago
-18852 second ago
-10625 second ago
-10078 second ago